प्रेमाञ्जली [कथा] | Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
२०७७ भाद्र २०, शनिबार ०८:४३ गते
गाउँघर होस् या स्कुल, कलेज । सबैतिर सबैको प्यारो नाम हो, अञ्जली । उनी सबैकी प्यारी नहून् पनि कसरी ? कसैलाई दुःख–पीडा पर्दा पीडितलाई बरू त्यति बिझाउँदैनथ्यो होला जति पीडितको असह्य पीडाले उनलाई । बालापनदेखि नै उनी कसैको दुःख देख्नै सक्दिनथिइन् । विभिन्न संघसंस्था गुहारेर हुन्छ या आफैँ लागेर हुन्छ सम्भव भएसम्म पीडितलाई पीडाबाट मुक्ति दिलाउनु उनको उद्देश्य हुन्थ्यो । साँच्चै भन्ने हो भने कसैलाई गाह्रो–साह्रो पर्दा डाक्टर, धामी–झाँक्रीभन्दा पनि पहिले अञ्जलीको नाम लिन्थे गाउँलेहरु । स्कुले जीवनदेखि नै पढाइका अलावा अतिरिक्त क्रियाकलापमा पनि साह्रै निपूर्ण थिइन् र त जिल्लास्तरमै स्कुलको नाम रख्न सफल भएकी थिइन् उनी ।
समयहरु बित्दै गए । विक्रम संवत् २०६२÷६३ सालतिर हुनुपर्छ, उनले आफ्नो गाउँको विद्यालयबाट माध्यमिक तहको शिक्षा पनि राम्रो अंक ल्याएर उत्तीर्ण गरिन् । तर, विकटताका कारण नचाहेरै भए पनि आफ्नो प्यारो गाउँ छाडेर उनी अन्त कतै जानुपर्ने भयो, उच्च शिक्षाका लागि । बाबा–आमाको सल्लाहबमोजिम उनलाई चितवन मामाघर बसेर पढ्ने वातावरण बनाइयो । फलस्वरुप, दुई–चार दिनको अन्तरालपछि उनी पूर्वी चितवनको टाँडीस्थित शहीद स्मृति बहुमुखी कलेज उनको रोजाइमा प¥यो र उनी सोही कलेजमा आई प्रवीणता प्रमाणपत्र तहको प्रथम वर्षमा भर्ना भइन् ।
यसरी पढ्दै जाने क्रममा स्कुलमा जस्तै कलेजमा पनि उनले सधैँ प्रथम हुने छात्राका रुपमा आफ्नो नाम लेखाउन थालिन् भने सोही क्लासको दोस्रो हुनेको तालिकामा चाहिँ प्रेमको नाम आउँथ्यो । प्रेम पनि एक होनहार, लगनशील र मेहनती विद्यार्थी त थियो नै, त्यसका अलावा समाजसेवामा पनि ऊ अञ्जलीभन्दा कम थिएन । प्रेम तथा अञ्जलीको स्वभाव, दुवैको सोच, बानी–व्यहोरा एकदमै मेल खान्थ्यो । जसले गर्दा शिक्षकशिक्षिकालगायत आफ्ना साथीभाइहरु सबैसबैका लागि प्रिय बन्न सफल भएका थिए, ती जोडी । हुन पनि हो, जब आआफ्नो काम र कर्तव्यप्रतिको लगनशीलता, दुःखी र गरिबप्रतिको सेवा तथा सद्भाव, दुवैको सोच आदि इत्यादि कुराहरुको बेजोड मेल दुवैमा हुन्छ भने त्यहाँ प्रेम (माया) अंकुराउनु त स्वाभाविक नै थियो ।
यी दुईबीचको आत्मीय प्रेम बिस्तारै–बिस्तारै झाँगिदै जान थाल्यो । प्रेम–अञ्जलीको यो जोडीले पनि कुनै दिन संसारका उदाहरणीय जोडीहरु मुना–मदन, मालती–मंगले, रोमियो–जुलियट, हिर–राँझा, लैला–मजनु आदि जोडीहरुझैँ सार्थक र उदाहरणीय रुप लिन्छ भन्ने कुराको अड्कलबाजी गर्न जोकोहीलाई पनि गाह्रो पर्दैनथ्यो । जजसले जे–जे सोचे पनि उनीहरु दुईमा एकले अर्कालाई खोइ केकति कारणले हो ‘म तिमीलाई मन पराउँछु’ भनेर भन्न भने सकिरहेका थिएनन् । सायद, उनीहरुको प्रेम भावी जीवनसाथी नभई मात्र निकट साथीको पो थियो कि !
यसरी नै आआफ्नो मर्यादाको दायरा ननाघी बिस्तारै–बिस्तारै उनीहरु एकअर्कामा समाहित हुँदै गए । उनीहरुको प्रेम सम्बन्ध झन्झन् प्रगाढ बन्दै गयो । कलेजमा त यी जोडी चखेवाका जोडीजस्तै सँगै हुन्थे नै । तर, कलेजका अलावा पनि उनीहरु एकअर्कामा कत्ति पनि टाढा हुन चाहेनन् । चाहे त्यो पढाइको सवालमा होस् या समाजसेवा या त हाम्रो अड्कलबाजीअनुरुप झाँगिदै गरेको मायाप्रेमको सवाल नै किन नहोस् । यसरी उनीहरु एकअर्काबीच नजिकिँदै जाने क्रममा २०६० फागुन २ गते जन्मिएको त्यो नाबालक अनुहार पुस्तिका (फेसबुक) नामक सामाजिक सञ्जालको सहारा लिन पुगे उनीहरु । उक्त सामाजिक सञ्जालले उनीहरु दुईको दूरीलाई केही हदसम्म भए पनि सामीप्यताको आभाष दिलाउन क्षितिजको रुपमा काम गथ्र्यो । अहिलेसम्म पनि उनीहरुको झाँगिदै गरेको प्रेमलाई म के नाम दिऊँ, निकट साथी या भावी जीवनसाथी ! कुनै निक्र्योल पाउन सकेको थिइनँ मैले।
समयले आफ्नो काँचुली फेर्दै जाने क्रममा प्रवीणता प्रमाणपत्र तहको अन्तिम परीक्षाले पनि ढोकाको संघार टेक्न आइपुग्यो । जसले गर्दा यो अन्तिम परीक्षा नसकिउञ्जेल भेटघाट अनि कुराकानीलाई केही समयका लागि थाती राख्दै मात्र पढाइमा दत्तचित्त हुने सहमति भयो, प्रेम तथा अञ्जलीबीच । तर, एकदिन प्रेमले आफूलाई केही असह्य भएको महसुस ग¥यो क्यारे, आफूसँगै ओछ्यानमा रहेको सेलफोन उठाएर अञ्जलीको नम्बरमा डायल ग¥यो । अञ्जलीले उताबाट फोन रिसिभ गर्दै भनी ः
‘हेल्लो ! अँ, भन प्रेम । आज कताबाट याद आयो तनि तिमीलाई मेरो ? खोइ, किन हो कुन्नि आज बिहानैबाट मलाई पनि साह्रै तिम्रो याद आइराखेको थियो । तिमीलाई फोन गर्न भनी दुई–तीनचोटि मोबाइल समातेँ पनि तर फेरि सोँचे, तिमीलाई पढाइमा डिस्टर्ब पो हुुुने हो कि ! तर, तिमीले नै पो फोन ग¥यौ मलाई । सो, आई एम सो ह्याप्पी ! अनि भन प्रेम केही काम विशेषले फोन ग¥यौ कि यत्तिकै मेरो न्यास्रो लागेर ?’
बाफ रे ! सास फेर्नै बिर्सने गरी प्रश्नमाथि प्रश्न अनि कौतुहलताको झटारो बर्साइन् त अञ्जलीले ! सायद, साह्रै न्यास्रेकी थिइन् उनी, प्रेमको बोली सुन्न नपाएर ।
‘मिस यू अञ्जली ।’
‘मिस यू टु प्रेम ।’
प्रेम एकछिन रोक्कियो । मानौँ, केही कुराले उसको गला अवरूद्ध भैरहेछ । केही समयपछि ऊ फेरि बोल्यो ।
‘अँ, भन न प्रेम किन ? एकछिन त सन्नाटा छायो त ! आर यू ओके ?’
‘या, आइ एम फाइन । बाइ द वे, आई लभ यू अञ्जली !’
‘लभ यू टु प्रेम !’
‘अञ्जली, के तिमी मलाई अहिले भेट्न आउन सक्छ्यौ ?’
‘अफकोर्स, ह्वाई नट प्रेम ? मलाई पनि तिमीसँग एकदम भेट्न मन लागेको छ ।’
‘अञ्जली, म अहिले न्यू चितवन मेडिकल कलेजमा एडमिट छु । तिमी छिट्टो आऊ, ल ।’
अञ्जली केही अत्तालिएको भावमा बोल्छे ः
‘ओ माई गड ! किन, के भयो तिमीलाई अचानक त्यस्तो ? प्रेम मलाई भन त प्लिज !’
‘नाइँ डियर, डराउनुपर्ने त्यस्तो केही भएको छैन मलाई । एज सुन एज पोसिबल, बरू तिमी छिट्टै आउन, ल ।’
‘ल ल हुन्छ प्रेम, म आइहालेँ ।’
अञ्जली ले फोन काटिसकेपछि हतार–हतार लाग्छिन् उनी हस्पिटलतिर । कसैको पनि दुःख देख्न नसक्ने अञ्जलीलाई आज आफ्नै प्रेममाथि यत्रो बज्रपात ! उनी हतास–हतासमा पुगिन् हस्पिटल । रिसेप्सनमा सोधपुछ गरिसकेपछि प्रेमलाई राखेको वार्डतिर हत्तारिँदै लम्किन्छिन् । तर, वार्डमा पुग्नुअगावै एक जना अधबैँसे आइमाईले उनलाई रोक्दै सोध्छिन् ः
‘नानी, तिमी को हौ बा ? प्रेमलाई चिन्छ्यौ र तिमी ?’
‘हजुर, प्रेमलाई राम्ररी चिन्छु म । हामी एकदम मिल्ने, सँगै कलेज पढ्ने साथी हौँ । म प्रेमको नजिकको साथी ।’
‘ए नानी, साथी सम्झिएर आयौ । खुसी लाग्यो ।’
‘अनि हजुर ?’
आँखाभरि आँसु बनाउँदै ती अधबैँसे आईमाइले भनिन् ः
‘म प्रेमकी आमा !’
‘ए आमा, नमस्ते ! के भएको हो र प्रेमलाई ? कस्तो छ अहिले उसलाई ❓’
‘प्रेमलाई ब्लड क्यान्सर भएको छ रे नानी, डाक्टरले भनेको । ऊ अहिले बेहोस छ । उसको बाबालाई पनि यही ब्लड क्यान्सरले लग्यो । यही एउटा छोराको मुख हेरेर बाँचिरहेकी छु अहिलेसम्म । तर, उसलाई भेट्दा यो रोग लागेको भनेर नभन्नू है । उसलाई केही थाहा छैन, यसबारेमा ।’
आमाको मुखबाट यस्तो सोच्दै नसोचेको कुरा सुनिसकेपछि अञ्जली साह्रै विक्षिप्त भइन् । यो खबरले एक प्रकारको पागलजस्तै भई, अल्लि पर एउटा कुनामा गएर रून थालिन् उनी ।
केही समयपछि एक जना नर्स आमाकै छेउमा आइन् र भनिन् ः
‘अहिले हजुरको छोरालाई होस आएको छ आमा, भेट्न जानुभए हुन्छ ।’
आमा भित्र पुग्नासाथ प्रेमले आमालाई सोध्छ ः
‘आमा, मलाई भेट्न कोही आएको थियो ?’
‘अँ, एक जना नानी आएकी छिन् । बाहिर छिन् ।’
‘आमा, पक्कै पनि अञ्जली आएको हुनुपर्छ । म एकैछिन अञ्जलीसँगमात्रै कुरा गर्न चाहन्छु । अञ्जलीलाई भित्र पठाइदिनू न, ल ।“
‘ए, ल ल बाबु । म पठाइदिन्छु’ भन्दै आमा बाहिरिइन् र अञ्जली भएतिर गइन् ।
‘नानी, तिमीलाई प्रेमले भेट्न खोजेको छ । तिमी भित्र जाऊ रे ।’
आमाको यो आवाज सुन्नेबित्तिकै अञ्जली दौडिँदै भित्र जान्छिन् । ढोकाको छेवैमा पुगेर एकछिन टक्क अडिएर प्रेमले थाहा नपाउने गरी आफ्ना भिजेका परेलीहरुलाई केही ओभानो बनाउने असफल प्रयासपश्चात् प्रेमको छेवैमा पुग्छिन् । तर आँसु न हो, किन पो रोकिन्थ्यो र !
(आँखाबाट बगिरहेका बलिन्द्रधारा आँसु रोक्दै) ‘प्रेम, कस्तो छ तिमीलाई अहिले ?’
(पीडामिश्रित नक्कली हाँसो देखाउँदै) ‘अञ्जली, तिमी आयौ ! अब, तिमी आयौ मलाई ठीक भैहाल्छ नि !’
(मनको पीडा हल्का गर्न मुस्कुराउँदै) ‘म के भगवान् हो र, आउनेबित्तिकै ठीक हुने ? हँ पागल ?’
(मन्द–मन्द मुस्कानका साथ) ‘मेरो लागि त तिमी भगवान् नै त हो नि, पागल्नी !’
‘कुरा गर्न त तिमीलाईजति अरु कसलाई आउँछ र !’
‘आखिर तिमीलाई मैले मोहित पारेको पनि त यही कुराले हो नि, हो कि होइन भन त ?’
‘साँच्चै हो प्रेम, तिम्रो यो सफा मन अनि तिम्रो यही मीठो बोल्ने शैली त हो नि, मलाई साह्रै मन पर्ने ।’
यसरी नै मीठा–मीठा भलाकुसारी हुँदै गर्दा, प्रेमले आँखा बन्द गर्दै सुत्ने प्रयास गर्छ । केही समयपछि ऊ मस्त निद्रादेवीको काखमा लुटपुटिन्छ । अञ्जलीले प्रेमलाई झकझक्याउँछिन् । तर, कुनै प्रतिक्रिया जनाउँदैन प्रेमले । अञ्जलीको मन पनि चिसो हुँदै आयो । मन चिसो नहोस् पनि कसरी ? एकछिनअगाडिसम्म मीठा–मीठा गफ गरिरहेका जोडी, तर अहिले…!
अब भने अञ्जलीले अड्कल काटिसकेकी हुन्छिन् । मेरो प्रेम यो दुनियाँमा रहेन । र पनि अञ्जलीले प्रेमको साथ छोडिनन् । प्रेमलाई अँगालोमै बेरेर बसिरहिन् । अँगालोमै बेरिएको अवस्थामा उनी पनि त्यहीँ निदाउँछिन् ।
धेरै समय भैसक्दा पनि अञ्जली नफर्किएपछि प्रेमकी आमा भित्र जान्छिन् । भित्र दुवैजना अँगालोमा बेरिरहेको देखेर आमाले अत्तालिँदै दुवैलाई झकझक्याउँछिन् । तर अहँ, दुवैबाट केही प्रतिक्रिया आउँदैन । उनी त्यहीँ रून–कराउन, बिलौना गर्न थालिन् । उनको त्यो कारूणिक स्वरले एक जना नर्स दौडिँदै त्यहाँ आइपुग्छिन् र अञ्जलीलाई प्रेमको अँगालोबाट अलग्याउने असफल प्रयास गर्छिन् । ती नर्सले आफूद्वारा यो काम सम्भव देखिनन् । अनि उनले डाक्टरलाई खबर गरिन् । डाक्टर आएर चेकजाँच गर्दा केही समयअगाडी प्रेमको इहलीला समाप्त भएको र त्यसैको परिणामस्वरुप अञ्जलीको पनि हृदयका कारण मृत्युको घोषणा गरिदिन्छन् ।